I-Hobbycarbon 15mm 30mm Aluminium clamp clamp ye-FPV China Manufacturer
Incazelo:Umkhiqizo wekhwalithi ephezulu ye-Hobbycarbon,Ikhwalithi Ephakeme Yomqondo esezingeni eliphakeme,Amandla we-Aluminium Clamp
Home > Imikhiqizo > I-Carbon Fiber Tube NeCampamp > Isigaxa se-Tube > I-Hobbycarbon 15mm 30mm Aluminium clamp clamp ye-FPV
I-Model No.: HCC-0517
12mm-30mm wangaphakathi wepayipi ungqimba wepayipi, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa okungaphezulu kwe-anodised.
Ububanzi obungaphakathi: 16-25mm
Ngaphandle kwama- aluminium clamp , i- Machine Screw
Izinkinobho Zekhanda Lenkinobho
I-Tube Clamp Insimbi Engagqwali
Izithambo Zensimbi Tube
Isayizi eyenziwe ngokwezifiso ingaba ukusekela ukukhiqizwa ngokusekelwe kufayili le-.stp noma le-.step noma amasampula.
I-oda elincane le-Accpet & i-Serviceicer kuya ngokuya ngemininingwane yesimo inikezela ngezeluleko ezithile.
I-Hobbycarbon CNC LIMITEDis ingumkhiqizi we-OEM okhethekile emikhiqizweni yeCarbon fiber, insizakalo ye-carbon fiber CNC, ezinye izinsimbi ze-drones & izimoto. Ngezidingo ezandayo zebhizinisi lomkhiqizo, sandisa ibhizinisi lethu ekuthengeni i-Aluminium CNC, sazinikela ekuhlinzekeni insizakalo ephelele kubathengi.
Ama-3.Orders kudingeka akhokhe inani lokuthenga inani elingaphezu kwamaphesenti angama-30 lokukhokha;
I-CNC Aluminium Clamps evundlile yama-Sqaure Tubes Xhumana Nanje
ICustom High Modulus Carbon Fibre Octagonal Tube Xhumana Nanje
I-Carbon Fiber Tube enama-Aluminium eyenziwe ngezifiso Xhumana Nanje
Uhlobo olusha lwekhwalithi ephezulu ye-octagonal carbon fiber tube Xhumana Nanje
I-Vertical or Roll Aluminium Clamp yama-Octagonal Tubes Xhumana Nanje
I-Octagonal Tube Clamp evundlile I-Anodized Black Low Intengo Xhumana Nanje
Umkhiqizo wekhwalithi ephezulu ye-Hobbycarbon Ikhwalithi Ephakeme Yomqondo esezingeni eliphakeme Amandla we-Aluminium Clamp Ikhwalithi ephezulu Ye-Fibre Carbon Ikhwalithi ephezulu yeCarbon Fibre Ikhwalithi ephezulu YeCarbon Glass Ikhwalithi ephezulu yeCarbon Fibre Cnc Ikhwalithi ephezulu Yekhabhoni
Umkhiqizo wekhwalithi ephezulu ye-Hobbycarbon Ikhwalithi Ephakeme Yomqondo esezingeni eliphakeme Amandla we-Aluminium Clamp Ikhwalithi ephezulu Ye-Fibre Carbon Ikhwalithi ephezulu yeCarbon Fibre